Government Terms - အစိုးရဆိုင်ရာ ရာထူးအခေါ်အဝေါ်များ
Government Unit Positions Terms (အစိုးရဆိုင်ရာ ရာထူးအခေါ်အဝေါ်များ)
ဒုသမ္မတ (Vice President)
ဒုမြို့တော်ဝန် (Vice Mayor)
တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် (Chief Minister)
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် (Union Ministers Region (or) State Ministers)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် (Chief Minister of Mandalay Region)
ဒုဥက္ကဌ (Vice Chairman)
အမှုဆောင်အရာရှိ (Executive Officer)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (Director General)
ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (Deputy Director General)
ဒု-ညွှန်မှူး (Deputy Director)
လ/ထညွှန်မှူး (Assistant Director)
ဌာနမှူး (Head of Department)
ဌာနခွဲမှူး (Head of Branch)
ဌာနစုမှူး (Head of Section)
ဒုဦးစီးမှူး (Deputy Head of Section)
ဦးစီးအရာရှိ (Staff Officer)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (Joint Secretary)
ကော်မတီဝင် (Committee Member)
ရုံးအကြီးအကဲ (Head of Office)
၀န်ထမ်းအကြီးအကဲ (Head of Service Personnel)
ဌာနအကြီးအကဲ (Head of Department)
ကိုယ်ရေးအရာရှိ (Personal Officer)
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (Township Administrative Officer)
BIG ကြီးကြယ်မြင့်မြတ်သော အောင်မြင်မှုအတွက်… (၅-မိနစ်ဖတ်ကြည့်ရင် ဘ၀ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာ…)
၃ နှစ်အတွင်း Self Made Millionaire ကိုယ်တိုင်မီလျံနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့ DALIEL ALLY ရဲ့ TED TALK ဟောပြောမှုမှ ကိုးကားထားပါတယ်၊ BIG ကြီးကြယ်မြင့်မြတ်မှုတွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချက် (၃-ချက်) ဟာ အက္ခရာဖြစ်တယ်လို့ ခံယူမိတာကြောင့် အားလုံးအတွက်လည်း များစွာဗဟုသုတဖြစ်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ... More
Social Media Marketing အွန်လိုင်းမှ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှု နည်းလမ်းများ
Marketing သမိုင်းကြောင်း နဲ့ 4-P ရဲ့ ရာစုနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲလာမှုကို လေ့လာကြည့်ရင်…
Marketing (1.0) ဆိုတဲ့ - ၁၉ ရာစုခေတ်က Industriy စက်မှု စတင်ထွန်းကားလာပြီး Production ထု... More
ပြောင်းလဲလာတဲ့ Marketing 3.0 ဆိုတာ - ၂၁ ရာစုခေတ်၊ တိုးတက်လာတဲ့ Technology နည်းပညာကို ပေါ... More
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းအမျိုးအစားများ
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းဌာနတွေ ၊အသင်းကြီးတွေမှာ မတူညီတဲ့ စွမ်းရည်အမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေပါတယ်၊ အဲဒီမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့သားတစ်ဦးချင်းက သူတို့တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းမှာမတူညီတဲ့ အရည်အသွေးတစ်မျိုးစီနဲ့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမတူညီတဲ့စွမ်းရည်တွေကို အချိုးညီညီ ပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ မန်နေဂျ... More
နိုင်ငံတကာခေတ်ပြိုင်အတွက် English for Everyone လူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ။
နိုင်ငံတကာခေတ်ပြိုင်အတွက် English for Everyone လူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ။ ----------------------------------------------------------------------------------------
တချို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအထင်ကြီးမှုနဲ့ ပြောတက်အောင် လေ့လာကျတာမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အတွက်တော့ အထင... More
အလုပ်အကျွေးပြုခေါင်းဆောင်မှု| Servant Leadership…….
အလုပ်အကျွေးပြုခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ရပ်ကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်လောက်က Robert Greenleaf ဆိုတဲ့ပညာရှင်က အဆိုပြုခဲ့တယ်။
Greenleaf ကတော့ Service to followers is the primary responsibility of leaders. လို့ပြော
ထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိမိရဲ့ဦးစီးမှုနောက်မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ... More